Weelka lagu dhaqo banaanka ayaa runtii waxtar leh! Laakiin Hadaadan Fiiro Gaarin 5-taan Qodob, Dhibaato Joogto ah oo Dambe!
Bogga ugu weyn / blog / Weelka lagu dhaqo banaanka ayaa runtii waxtar leh! Laakiin Hadaadan Fiiro Gaarin 5-taan Qodob, Dhibaato Joogto ah oo Dambe!
2021 / 04 / 06 Qoondayntablog 1343 0
Sidee bay ugu dhib yar tahay inaad haysato hal musqul oo keliya guriga? Tusaale ahaan, subaxnimada maalmaha shaqada, waa inuu musqusha aado, waa inaad dhaqdaa, si fudud laguma fulin karo isla waqtigaas! Naqshadaynta qalabka wax lagu maydho ee dibadda, ayaa si wax ku ool ah u xallin kara dhibaatadan, ma aha oo kaliya hagaajinta isticmaalka musqusha, laakiin sidoo kale kala-soocid dhammaystiran oo qoyan iyo qalalan, sidoo kale saaxiibtinimo badan u leh qoysaska yaryar ~
Naqshadda weelka lagu dhaqo waa in weelka maydhashada laga raro suuliga, musqusha iyo qubeyska oo ku yaal meel keliya, weelka lagu dhaqo aag kale, labada meel dhexdooda isma faragelinayaan, halka adeegsiga khilaaf kasta oo dhaca aanu dhici doonin.
Maxaa yeelay, meesha musqusha waa yar tahay, ka dib marka dhaqaaqo saxanka qolka, waxay kordhin kartaa aagga aagga qoyan ee gudaha ku yaal, mar dambe uma eka inay ciriiri tahay! Marka waa mid saaxiibtinimo u leh qoysaska yaryar.
Marka lagu daro hubinta kala-qoynta iyo qalalan kala-goynta iyo sahlanaanta isticmaalka, saxanku sidoo kale wuu ka nadaafad iyo nadaafad badan yahay.
Iyadoo aan lakala soocin qoyan iyo qalalan, shukumaanada, burushka cadayga iyo waxyaabaha kale ee daruuriga u ah nolol maalmeedka, waxay ku jiri doonaan jawi qoyan waqti dheer, si sahlanna loo abuuri karo bakteeriyada. Saxanka waa la rari doonaa, dhibaatadaas oo kale ma jiri doonto, aagga ka baxsan ayaa aad uga qalalan musqusha.
Intaas waxaa sii dheer, markaad sameyneyso saxanka banaanka, arrimaha soo socda waa inaan la iska indhatirin.
Ma jiro tuubbo bullaacad ah oo ka baxsan musqusha, si loo xalliyo dhibaatada biyaha kor iyo hoosba, dhismaha wuxuu u baahan yahay inuu jiido tuubo toosan oo horay loo sii wado saxanka.
Iyadoo la tixgelinayo in isticmaalka biyuhu aanu yareyn, aagga ka baxsan waa inuu ahaadaa mid biyo-diid ah! Darbiga saxanka iyo dhulka hoose waa in lagu rinjiyeeyaa biyo celin si looga hortago daadashada biyaha u horseedaya qoyaan iyo caaryada derbiga.
Marka la eego baaxadda lakabka biyuhu xireen, waxaa ugu wanaagsan in dhulka si toos ah uga hooseysa saxanka hoosta laga mariyo illaa 1.5m oo ka sarreeya booska derbiga saxanka.
Darbiga waxaa lagula talinayaa in lagu dhejiyo alwaaxda wanaagsan, ka dib oo dhan, marka la barbar dhigo rinjiga cinjirka ah, gidaarka iyo waxyaabo kale, awoodda biyuhu ka sameysan yihiin ayaa ugu fiican, waxaa jira biyo lagu buufiyay masax.
Sida darbiyada oo kale, sagxada sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho foornada, haddii aad rabto inaad dhigto sagxadda dhulka, xusuusnow inaad dhigto dhagx marin fiican oo ku ag yaal saxanka, si labada qalab ay u helaan saameynta kala-go'idda.
Saxanka waa in lagu sameeyaa biyaha xira si looga hortago biyaha saaran miiska dushiisa inuu ku ekaado dhulka, waxaa fiican in la sameeyo ka hor iyo ka dib, laakiin sidoo kale in laga hortago in biyuhu ay derbiga ku soo dhacaan. Ha u maleynin in biyuhu uusan shaqeyneyn, saameynta rakibida ayaa hubaal ka fiican sidii aan loo rakibin!
Ka dib marka weelka la dhaqaajiyo, waxaad dareemi kartaa wax yar oo aan qurux badnayn oo soo jiidasho leh, markaa haddii ay jirto meel bannaan oo ku filan, waxaad samayn kartaa qayb si aad u daboosho, sida muraayadda muraayadda madow, qaybta bannaan ayaa ah xulasho wanaagsan ~
Hore:: Kani waa Musqusha, Ka gurigaaga ku yaalo waa Musqul keliya - Isbeddellada cusub ee Naqshadaynta Musqusha 2021 Next: 3 ㎡ ~ 8 Design Naqshadaynta Qurxinta Musqusha, Noocyada Kala Duwan Ee Kolkaad Timaado
2021 / 04 / 12 381
2021 / 04 / 12 452
2021 / 04 / 11 817